Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Siiriya oo Gaadhay Isreebreebka Koobka Adduunka (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha iyo cRx Yameni: Siiriya oo Gaadhay Isreebreebka Koobka Adduunka (dhegayso)
Seteembar 6, 2017 2:09 b 0
Tababaraha xulka qaranka Argentina, Jorge Sampaoli, ayaa beeniyay in ay isku dhaceen xiddiga qaranka Argentina, Lionel Messi. Jorge Sampaoli ayaa been ku tilmaamay wararka sheegayay in ay Messi uu khilaaf soo kala dhex galay.
Kulamo ka tirsana is reebreebka koobka aduunka ayaa la ciyaaray waxay ahaayeen kulamdii ugu danbeeyay wixii xiligan ka danbeeya ciyaartoyda ayaa ku laaban doona kooxihii ay tirsanayeen tan iyo bishan dhamaadeedka lama ciyaari doono kulamada loogu soo baxayo koobka aduunka.
Siiriya ayaa wacdaro dhigtay, lana barbardhacday Iran, oo ku soo baxday isreebreebka koodka adduunka. Faahfaahin dheeraad ah halkan riix.